किन स्थगित भयो माओवादीकाे बैठक ? – Jagaran Nepal
किन स्थगित भयो माओवादीकाे बैठक ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको शुक्रबार र शनिबारका लागि तय भएको केन्द्रीय समितिको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
माओवादीले पदाधिकारी चयनलगायतका विषयमा छलफलका लागि बैठक बोलाएको थियो । केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको हो ।
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज र भोली काठमाडौंमा गर्ने तय भएको थियो । करिब एक महिनाअघि नै तय भएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको हो ।
पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व एमसीसी प्रकरणमा विवादित बनेका छन् । सो विवादले गर्दा प्रचण्ड अहिले निर्णायक छलफलमा छन् ।
कोरोनाको बहाना बनाएर बैठक स्थगित गर्दैगर्दा आन्तरिक रुपमा एमसीसी प्रकरण साम्य हुने स्थिति बन्ने पनि आंकलन छ । तर, केन्द्रीय सदस्यहरुले भने भोलिदेखि हुने बैठकमा एमसीसीको सवाल जोडदार उठाउने पक्का देखिएको थियो ।
त्यस्तै, केन्द्रीय समितिको बैठकको पूर्वतयारी नपुगेकाले पनि बैठक स्थगित गर्नुपरेको प्रचण्ड सचिवालयका एक सदस्यको भनाई छ । आन्तरिक रुपमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन तथा पदाधिकारी टुंगो लगाउने विषयमा प्रचण्डले प्रयाप्त छलफल गर्न पाइरहेका थिएनन् ।
एमसीसी विवादसँगै सत्ता गठबन्धन धर्मराएको छ । अहिलेकै स्थितिमा गठबन्धनमा सहभागी भएर जान नसकिने भन्दै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बताईसकेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनलाई वास्तै नगरी कांग्रेस भने एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा पुगेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक राख्नुभन्दा विकसित घटनाक्रमले केही मोड लिएपछि बैठक गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
राम्रोसँग देश चलाउन उमेरले रोक्दैन